Vanozvibatira Mabasa eMaoko Votambira neMufaro Kuvhurwa kweNzvimbo dzeKutengesera muHarare
Chikunguru 07, 2020
Kanzuru yeHarare yazivisa kuti musika weMbare unogona kuvhurwa chero nguva sezvo wawe kupera kuvandudzwa kuti ufambirane nehutsanana.
Kanzuru yeguta reHarare inoti boka revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko ravhurwa zvakare muguta iri asi pachiteverwa zvakasimba mitemo yezvehutano yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Kanzuru yazivisa nezvekuvhurwa kwemusika weCopacabana Traders Mall, uko vachange vachitengesera mumusika uyu vachange vachibhadhara madhora mashanu emari yekuAmerica pazuva.
Kanzuru yazivisawo kuti musika mukuru weMbare wave pedyo nekuvhurwa zvichitevera kuvandudzwa kwawanga uchiitwa kuti ufambirane nenyaya dzekuchengetedzwa kwehutsanana.
Vanorarama nekutengesa vanoti vanotambira nemufaro kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekutengesera uku vachiti vazhinji vavo vanga vave kunonga svosve nemuromo kubva pakadzikwa mutemo unorambidza kufambafamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VaSamuel Wadzayi, vanoti vanotambira danho iri nemufaro asi vanofunga kuti madhora mashanu ari kunzi vanhu vabhadhare pazuva imari yakawandisa.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichael Chideme, vaudza Studio 7 kuti musika weCopacabana Traders’ mall hausi pasi pekanzuru yeHarare izvo zvinoita kuti vasave nechekuita nekutarwa kwemari dzinobhadharwa nevanhu pazuva.
Vakafanobata chigaro chemukuru weSurvival Vendors Union of Zimbabwe, VaObey Mwariwangu, vatiwo sesangano vanotambira danho rekuvhurwa zvakare kwemisika iri, asi vanoona sekunge mitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19 yakanyanya kuomera vanhu.
VaMwariwanguu vanoti vanotengesa ava ndivo vachange vachitarisirwa kutenga voga mishonga inouraya hutachiwana pamwe nema face mask, izvo vanoti zvinogna kudhurira vakawanda.
Hatina kukwanisa kubata varidzi veCopacabana Mall kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Human Rights Watch Inoburitsa Gwaro Rinoshora Zvikuru Mhirizhonga Inobata Vabvakure Vari muSouth Africa